May 15, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on चरमोत्कर्षमा महिला पुगेको कसरी बुझ्ने ?
पुरुष किन चरमोत्कर्षमा पुग्छ रु त्यसको कारण थाहा पाउन अप्ठ्यारो छैन । ‘जर्नल अफ एक्सपेरिमेन्टल जुलोजी’मा हालसालै प्रकाशित एउटा लेखअनुसार वीर्यको सिर्का फालेर महिलाको जननेन्द्रियभित्र शुक्रकीट प्रवेश गराई गर्भाधान प्रक्रिया सम्भव बनाउन पुरुष चरमोत्कर्षमा पुग्ने विधि विकसित भएको हो । सेक्सका क्रममा पुरुषले वीर्यपात गरेर मात्रै चरम सन्तुष्टि हासिल गर्न सक्छ । यसले पुरुषको चरमोत्कर्ष प्रजनन उद्देश्य पूर्ति गर्नेतर्फ लक्षित रहेको देखाउँछ ।
‘तर, महिलाको चरमोत्कर्ष कुन प्रयोजनका लागि अस्तित्वमा छ भन्ने प्रस्ट छैन,’ अनुसन्धानकर्ताद्वय मिहेला पाभ्लिसेभ र प्रा। गुन्टर वाग्नरले लेखमा भनेका छन् ।
सहउत्पादनसम्बन्धी सिद्धान्त उनले प्रक्षेपण गरेको पहिलो बृहत् सिद्धान्त हो । जन्मिएको पहिलो दुई महिनासम्म महिला र पुरुषमा समान गुण हुन्छन् भन्ने जीवविज्ञानले पुष्टि गरेको छ । यही अवधिमा मानव शरीरमा कोषिकालगायत समग्र शरीरको आधार निर्मित हुन्छ । ‘यही अवधिमा पुरुषले निप्पल ९स्तनको मुन्टो० र महिलाले चरामोत्कर्षको आधार हासिल गरेका हुन्छन्, जुन उनीहरूका लागि सहउत्पादन हुन् । महिलालाई चाहिने निप्पल पुरुषमा पनि रहन गयो र पुरुषलाई आवश्यक पर्ने चरमोत्कर्षको आधार महिलामा पनि रहन गयो,’ उनी भन्छिन् ।
महिला चरमोत्कर्षबारे यस्ता विभिन्न मान्यताका बीच पाभ्लिसेभ र वाग्नरले अघि सारेको मान्यताले यस क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ । उनीहरूका अनुसार डिम्बोत्सर्जनको विधिले नयाँ रूप लिएपछि अर्थात् यो व्यवस्थित भएपछि आफ्नो मूल उद्देश्यबाट मुक्त भएर महिला चरमोत्कर्षले सहायक उद्देश्य हासिल गर्न थाल्यो । सहायक उद्देश्यतर्फ ध्यान लगाएर हामी महिला चरमोत्कर्षको उद्भव पत्ता लगाउन सक्दैनौँ भन्ने पाभ्लिसेभ र वाग्नरको धारणा छ । अर्थात्, प्रजननसम्बन्धी उद्देश्यबाट मुक्त भएपछि पनि महिला चरमोत्कर्ष कुनै रहस्यमय कारणले अझै पनि अस्तित्वमा छ । शुक्रबारबाट
यौन प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा दलित महिलामाथि कुटपिट, प्रहरीद्धारा मिल्न दवाव
श्रीमान श्रीमतीको यस्तो गल्तिले गर्दा जन्मन्छन तेश्रो लिंगी बच्चाहरु
May 23, 2019 अखवार अनलाइन
पहिलो पटक समसर्ग गर्दा ध्यान पुराउनु पर्ने यी कुराहरु
August 29, 2019 अखवार अनलाइन
ट्युशन पढन आउने विद्यार्थीलाई शिक्षकले बनाउको यौनको शिकार, अश्लील भिडियो भयो लिक ! गाउँमा मच्चियो हंगामा
June 8, 2019 अखवार अनलाइन